FIDINANA TAMPOKA : Nitsinjo ireo sahirana teny Marais Masay ny Filoha mivady
Nidina ifotony tampoka teny amoron’i Marais Masay mifanila amin’i Manjakaray sy Amboditsiry ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy Mialy Rajoelina vadiny, omaly hariva, taorian’ny fanatrehany ny fizaràna vary teny Antsonjombe. 4 août 2020
Nandritra izany no namangian’izy mivady, tokantranona vahoaka sahirana maromaro sy nanolorana vary sy valopy. Nisy ihany koa tafa mivantana tamin’ireo vahoaka teny an-toerana ary nihainoan’izy mivady ny hetahetan’ireto vahoaka ambany tanàna ireto tena sahirana noho ity valanaretina covid-19 ity.
Nandritra ny tafa nifanaovan’ny Filoham-pirenena tamin’ireto « vahoakan’Ambany tanàna » ireo no nilazany fa : "Izahay tsy manadino anareo ary tsy mifanadino isika". "Tsy maintsy mahazo fanampiana momba ny sosialim-bahoka avokoa ianareo rehetra na manana karinem-pokontany na tsy manana. Izay no antony hidinako ety. Hisy ekipa ho avy ety aminareo hanadihady sy hijery ifotony izany ary hanome tapakila na "jeton" entina hakana ny fanampiana avy amin’ny sosialim-bahoaka. Manomboka androany izany ary tsy mijanona intsony raha tsy mahazo daholo", hoy ny Filoha. Ankoatra izay, fantatra fa hisy koa ny ekipa avy amin’ny Fid (fonds d’intervention pour le développement) hanadihady ifotony eny amin’ireo olona tsy mbola nahazo vatsy Tsinjo ireo.
Nisy tamin’ireo vahoakan’Ambany tanàna nandray fitenenana no nanambara : " Misaotra anao Prezidà fa tsy nisy nahavita ny nataonao, faly izahay satria izao vao mba misy Filoha mitsidika sy mijery ny momba anay."
Ny ankamaroan’izy ireo moa dia tsy manana asa intsony noho ity valanaretina covid-19 ity fa najanon’ny mpampiasa azy avokoa. Ao, ohatra, ny mpiasa amin’ny "zone franche". Ny sasany indray mpanamboatra bisky gasy, saingy tsy afaka mandray kaomandy avy amin’ny mpanjifa intsony noho ny fihanaky ny aretina sy ny fahasahiranana eo amin’ny sehatry ny fanaovan-trano. Ny hafa kosa mpivarotra kafe, saingy tsy idiram-bola noho ny tahotry ny olona misakafo an-tsena amin’izao fotoanan’ny covid-19 izao.
Nanome toky ny Filoha fa tsy maintsy hiahy azy ireo izy mivady ary hanolotra fanampiana hiatrehana izao aretina izao. Nanentana koa ny Filoha hitandreman’ny rehetra manoloana izao valanaretina izao. Fifanomezan-tanana, hoy izy, no ilaina amin’izao, ka na ny Fanjakana na ny vahoaka dia tsy afaka mandeha irery fa tsy maintsy mifameno. Nanome toromarika hentitra ho an’ireo mizara ny fanomezana avy amin’ny Fanjakana koa ny tenany hitsinjara izany am-pahitsiana ka hitsinjo sy hikaroka ny fianakaviana tena sahirana.